Beesha Habar-gidir oo balan qaaday ineey badbaadinayaan Askarigii dilay Siraaji ( VIDEO ) | Dayniile.com
Beesha Habar-gidir oo balan qaaday ineey badbaadinayaan Askarigii dilay Siraaji ( VIDEO )
Aug. 02 WARKA MAANTA, XULKA WARARKA Comments Off on Beesha Habar-gidir oo balan qaaday ineey badbaadinayaan Askarigii dilay Siraaji ( VIDEO )
Askarigaan oo lagu magacaabo Axmed C/llaahi Cabdi “Caydid” ayaa maxkamadda darajada koowaad ay ku xukuntay dil toogasho ah, markii ay ku caddaaday dilka wasiir Siraaji.
Waxgaradka beesha Habar Gidir ayaa kulankooda ku muujiyay sida ay ugu soo horjeedaan xukunka gacan ku dhiiglaha dilka geystay, waxayna sheegeen in caddaalad daro ay tahay arrintaasi isla markaana la siyaasadeeyay arinta dilka.
Waxay ku doodeen in falkaasi uu ahaa mid si kam ku yimid, diyaarna u yihiin inay la xaajoodaan qoyska uu ka dhintay wasiirka, taasi oo haddii ay ka dhaadhiciyaan inay aqbalaan diyo badbaadin karta askariga.
Waxay sheegeen in la isku diiday in qoyska uu ka dhintay wasiir Cabaas iyo beesha Habar Gidir in arrintaan ay ka xaajoodaan, arrintana gacmo kale ay ku jiraan oo la siyaasadeeyay, waxayna ugu baaqeen madaxweynaha in arrintaan faraha lasoo galo.
← YAAB: Wiil Indhaha laga soo riday oo Carabka wax ku arkaya
Beesha Habar-gidir oo balan qaaday ineey badbaadinayaan Askarigii dilay Siraaji ( VIDEO ) →
Maxaad kala socotaa 10-ka dumar ee Soomaalida ugu caansan dunida + SAWIRO